Dhererka, joogga, cabirka toosan iyo heerarka daruuraha | Saadaasha Shabakadda
Had iyo jeer waa muhiim in la caddeeyo heerka qaybaha qaarkood ee daruurtu ku yaalliin. Si loo muujiyo heerkaas oo kale, laba fikradood ayaa loo isticmaali karaa, kan ah altura iyo taas sare.
Dhererka dhibic (tusaale ahaan: salka daruur) waa masaafada toosan ee udhaxeysa heerka goobta indha indheynta iyo heerka bartaas. Waa in la ogaadaa in barta indha indheynta laga heli karo buur ilaa buur. Taabadalkeed, joogga barta waa masaafada toosan ee udhaxeysa heerka badda iyo heerka bartaas. Kormeerayaasha dusha guud ahaan waxay adeegsadaan fikradda dhererka. Kormeerayaasha diyaaradaha, si kastaba ha noqotee, guud ahaan waxay tixraacaan joogga. The aragti toosan daruur waa masaafada toosan ee u dhaxaysa heerka salkeeda iyo ta kore.
Daruuraha guud ahaan waxay ku yaalliin joog u dhexeeya heerka badda iyo heerka tropopause. Heerka ah cunuggu way isbedbeddelaysaa marka la eego booska iyo waqtiga; sidaa darteed, daruuraha dushooda ayaa ka sareeya meelaha kuleylaha ah marka loo eego bartamaha iyo latitude-yada dhaadheer. Waxaan xusuusan nahay in tropopause-ka uu ahaa soohdinta u dhexeysa meesha loo yaqaan 'troposphere' iyo 'stratosphere'.
Heshiis ahaan, qaybta jawiga ee daruuraha badanaa ka dhacaan waxaa loo qaybiyay saddex heer oo loo yaqaan, siday u kala horreeyaan, sare, dhexdhexaad iyo hoose. Dabaq kasta waxaa lagu qeexaa heerarka heerarka ay daruuraha noocyada qaarkood dhacaan inta badan. Dabaqyada xoogaa wey is dul saaran yihiin oo xadka ay ku kala duwan yihiin dhererka.
Tusaale ahaan, gudaha gobollada polar heerka sare wuxuu udhaxeeyaa 3 ilaa 8 km halka gobolada isbarbar dhiga heerkaan uu udhaxeeyo 6 iyo 18 km.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Daruuro » Dhererka, joogga, cabirka toosan iyo heerarka daruuraha
Isbedelka Tamarta ee Albedo iyo Earth